DAAWO: Madaxwayne Afrikaan ah oo 10 bilood kaddib la arkay isagoo ul ku tukubaya oo ay tillaabtu dhibayso! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Madaxwayne Afrikaan ah oo 10 bilood kaddib la arkay isagoo ul...
DAAWO: Madaxwayne Afrikaan ah oo 10 bilood kaddib la arkay isagoo ul ku tukubaya oo ay tillaabtu dhibayso!
(Libreville) 18 Agoosto 2019 – Madaxwaynaha Gabon ee Ali Bongo ayaa markii ugu horreeysey muddo 10 bilood ah meel maxfal ah soo istaagey isagoo ul ku tukubaya taagniduna dhibayso, kaddib markii uu ku dhuftay cudurka shallalku.
MW Bongo oo aabbihii Cumar xilkan ka dhaxlay ayaa mar qura kasoo muuqday sanad-guuradii 60-aad ee xorriyadda dalkaasi ka qaatay Faransiiska oo lagu dhigay caasimadda Libreville.
Ninkan 60-jirka ah, oo tillaabo kasta oo uu qaado laga dareemi karo heerka xun ee caafimaadkiisa, ayaa shalay si dhib leh salaanta ula gaarey saraakiishii lasoo rigeeyay, sida ay qortay AFP.
Waa markii ugu horreeyay ee meel Madaxtooyadiisa ka bannaanka ah lagu arko Bongo tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii tegey, marka laga reebo muuqaallo la jarjaray oo dadwaynaha loosoo bandhigayay.
Wuxu ubax dhigay qabriga Leon Mba, Madaxwaynihii koowaad ee dalkan yar ee saliidda ku hodanka ah, iyadoo ay munaasabadda dhami soconaysey 30 daqiiqo.
Afrika ayaa waxaa la tegey kali taliyayaal, xitaa xukunka ha jeclaadeene aan umadda nolol iyo nidaam u samaynayn, wax kastana iyagu liqa sida God Madoow ee laga sheego Hawada Sare.
Previous article”Nasiib wacan sidaad ula safatay KDF!” – Siyaasi Kenyan oo macasalaameeyay Axmed Madoobe
Next articleDAAWO: Imaaraadka oo lagu helay inuu QARAXYO & KHAARAJIN ka fuliyo gobolka (Daba-gal)